"पूंजीबजारमा महिलाहरुलाई प्रोत्साहन" - संरक्षणा चौधरी - Nepali Nepse
“पूंजीबजारमा महिलाहरुलाई प्रोत्साहन” – संरक्षणा चौधरी
१२ बैशाख २०७६, बिहीबार ०६:१७
युवा तथा महिला लगानीकर्ता भनेर लामो समय देखि चिनिदै आउनु भएकी संरक्षणा चौधरी हाल नेपाल पूंजीबजार संघमा अध्यक्ष को पद सम्हाल्दै आउनु भएको छ । उहाँ सङ्ग पूंजीबजारमा महिला लगानीकर्ता को भुमिका बारे नेपालीनेप्से अन्लाईन न्युज पोर्टलले राखेको यो अन्तर्वार्ता ।
➤ सर्वप्रथम त तपाईं एक महिला तथा युवा लगानीकर्ता हुनुहुन्छ , तपाइको सेयर बजारमा प्रवेश गर्दा को अनुभव केही सुनाउनु हुन्छ कि ?
सेयर बजारमा प्रवेश गर्दाको अनुभव बारे भन्नुपर्दा ,करिब पाच बर्ष अघि म सेयर बजारमा प्रवेश गरेकी हु । त्यति बेला सेयर बारे थाहा पाउने भनेको नै सेयर बाट पैसा आउँछ । र यो सेयर किन्ने भनेको बजार घटेको बेला र बेच्ने भनेको बजार बढेको बेला भन्ने बारे मात्रै थाहा थियो । कार्यलय समय दैनिक १२ बजे देखि ३ बजे को समय (शुक्रबार र सनिवार बाहेक हाल ११-३ सम्म) को यात्रा नै मेरो पहिलो सेयर बजार सम्बन्धि को सिकाइ वा अनुभव रहयो । त्यस पछिको दैनिक मार्केट वाचले थप यस क्षेत्रमा लागि पर्न को निम्ति मद्दत मिल्यो । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि सुरुवाती अवस्था मा काम गर्न निक्कै अप्ठ्यारो मह्सुस हुन्छ तर सेयर बजार प्रतीको मेरो जिज्ञासा र रुचि दिन प्रती दिन बढ्न थाल्यो र यस क्षेत्रलाई निरंतर समय दिन थालेको हुदा आज म यस स्थान सम्म आइपुगेको छु ।
➤ नेपालको सेयर बजार भनेको फाइदा लिनकै लागि प्रवेश गरिन्छ, यहाँले सुरुवाती समयमा नाफा घाटा के कस्तो पाउनु भयो ?
सेयर बजारमा मेरो पहिलो प्रवेश दोस्रो बजार मार्फत भएको थियो । पहिलो लगानी त्यो पनि दोस्रो बजार अनि रिक्समा थियो । भनिन्छ नि “वनको बाघले खावोस नखावोस मनको बाघ ले खान्छ” भनेर । ठ्याक्कै त्यस्तै भयो , लगानि डरमा परिणत भयो । यता बजारको घट्ने क्रम सुरु हुन थाल्यो अनि उता आफ्नो मन पनि अतालिन थाल्यो । हतासको होडबाजीले सुरुवाती चरणको लगानीले घाटा बेहोर्नु पर्यो ।तेहि घाटाले पछि बजार सम्बन्धि नया पाठ सिकायो ।
➤ पूंजीबजार भनेको हल्लै हल्लाको बजार पनि भनिन्छ , ठुला लगानीकर्ताले आफ्नो फाइदा लिनकै लागि विभिन्न किसिमको अपवाह फैलाइ दिन्छ भन्ने सुनिन्छ यस बारे तपाईं को कस्तो धारणा छ ?
यो सरासर गलत हो । अरुको कुराले तपाइलाई कति को फरक पार्छ भन्ने कुरा तपाईमा निर्भर रहन्छ । तर यस्तो अपवाह फैलिएको बेला बजारमा चलखेल हुने सम्भावना बढी रहन्छ जस्को कारण बजार केही हद सम्म बढ्ने वा घट्ने प्रक्रिया रहेता पनि यस्ले त्यति फरक पार्छ जस्तो मलाइ लाग्दैन । लगानी तपाईं को रिक्स तपाईं को र नाफाघाटा पनि तपाईं को भनेपछि निर्णय पनि त तपाई कै हुनु पर्यो नि हैन र !!
➤ बजार बिस्तारको लागि नेप्से, धितोपत्र बोर्ड तथा लगानीकर्ता संघहरु को कस्तो भुमिका हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ ?
बजार बिस्तारको लागि संबंधित सबै निकाय र संघहरु बाट पहल भइनै रहेको छ । बजार केही समय यता निरन्तर घटेको हुनाले लगानीकर्ताहरुको मनोबल सेयर बजार प्रती घटेको हो । बजार हो, बढ्ने र घट्ने क्रम त जारी नै भइ रहन्छ, त्यो बाहेक सबै संघसङ्ग्ठन तथा निकायहरुले आफ्नो स्थानबाट पूंजीबजार को बिकास एवम बिस्तारको लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने खालको कार्यक्रमहरु लेराउन जरुरि देखिन्छ ।
➤ तपाइले बजारमा साना लगानीकर्ताहरु प्राय धेरै अन्योलमा परेको देख्नु भएको होला,तपाइको बिचारमा लगानी गर्दा के के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ ?
सबै भन्दा पहिले त आफू सङ्ग प्रयाप्त लगानी गर्ने पूंजी छ भन्दैमा सबै एकै चोटि लगानी गर्न हुदैन । लगानी भनेको रिटर्न आउने कुरामा गर्नु पर्छ । बजारमा केही राम्रो स्कृप्ट भएको कम्पनी छानेर लगानी गर्न सकिन्छ जस्को लागि केही समय मार्केट वाच , कम्पनीको इतिहास देखि कम्पनीले बाडेको लाभांशको आधारमा गर्न सकिन्छ । साना लगानीकर्ता एवम् नयाँ लगानीकर्ताहरु अक्सर बजार बढ्ने बेला प्रवेश गरिरहेका हुन्छ्न जस्को कारण बजार घट्ने क्रममा उनिहरु को मनोबल कम्जोर हुन जान्छ र आतिन्न थाल्छ्न । एउटै कम्पनीमा धेरै लगानी गर्नु भन्दा धेरै कम्पनीमा थोरै थोरै लगानी गर्नाले पछि को लागि राम्रो हुन जान्छ ।
➤ नेपालको पूंजीबजारलाई प्रबिधिमैत्री ,लगानीमैत्री बनाउन को लागि के गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ?
नेपालको पूंजीबजारलाई प्रबिधिमैत्री ,लगानीमैत्री बनाउनको लागि लगानीकर्ताहरुको अझै विशेष गरेर नया लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढाउने खालको अन्तर्कृया कार्यक्रमहरु वा सेयर बजार सम्बन्धि छलफल कार्यक्रमहरु लेराउन सकिन्छ जस्को लागि पूंजीबजार संबंधित सम्पुर्ण निकायहरुले यस बिषयमा पहल गर्न जरुरी देखिन्छ भने यस्का लागि आम लगानीकर्ताहरुको भुमिका पनि उतिकै महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ ।
➤तपाईं युवा तथा महिला लगानीकर्ता भएको हैसियतले सरकार वा संबंधित निकायहरु ले के गरिदिएमा महिला लगानीकर्ता अझै पूंजीबजार तिर आकर्षित हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ?
नेपालको कतिपय क्षेत्रमा महिलाहरु अझै पनि घरको भान्सामा मात्रै सिमित रहेको पाइएको छ । देशको राजधानी काठमाडौ जस्तो ठाउमा पनि सेयर बारे थाहा नपाएका महिला दिदिबहिनीहरु थुप्रै हुनुहुन्छ । पूंजीबजारमा प्रवेश गर्न इच्छुक भएको तर “कहाँ, कसरी” गर्ने भन्ने बारे अन्योलता उत्तिकै रहेको पाइएको छ । महिला दिदिबहिनीहरुलाई बजार प्रती आकर्षित गर्नको निम्ति विभिन्न किसिमको सेयर बजार सम्बन्धि कार्यक्रमहरु लेराएर प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । अझै सेयर बजारमा महिला लगानीकर्ताहरुले कारोबार गर्ने हकमा केही प्रतिशत छुट को व्यवस्थाले यस पूंजीबजार क्षेत्रमा अझै महिला लगानीकर्ताहरु भित्रयाउन सकिन्छ
➤अन्तमा महिला लगानीकर्ताहरुलाई के सुझाव दिन चाहनु हुन्छ जो तपाईं जस्तै यस पूंजीबजारमा आउन चाह्नु हुन्छ ?
महिला अर्थात लक्ष्मी(भगवान ), र लक्ष्मी अर्थात धन । पुरुषको तुलनामा महिलाहरुमा बचत गर्ने क्षमता निकै बढि रहेको पाइन्छ । महिला दिदिबहिनीहरुले गर्ने बचतलाई भोलीको दिन मा लगानीमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । आजको बचत र भोलीको लगानीले पछि आउने दिन हरुमा केही हद सम्म सुनिस्चित गर्ने हुदा महिला दिदिबहिनीहरुको लागि यो क्षेत्र निक्कै राम्रो छ । बजार बारे बुझ्नुस, अनुभवी सङ्ग ज्ञान लिनुस, अनि लगानी गर्नुस । सहि ठाउमा गरेको लगानीले पक्कै पनि राम्रै प्रतिफल दिनेछ ।